I-china indawo efanelekileyo yokucoceka iphepha lokucoca iphepha, isihlukanisi seSlag seMill Mill mveliso kunye nabathengisi | YUNFENG
ICentriacleaner yeCentri ecocekileyo yePhepha loMatshini wePhepha, isahluli seSlag seMill Mill
Isicelo sokucoceka koxinano oluphantsi Olu lutyalo mali lwekhadibhodi yomatshini wamaphepha eekhadibhodi, uhlobo lokucoca amakhadibhodi luhlobo lwezixhobo zokutsala ezisetyenziselwa ukususa igranules emfutshane, amagwebu, iplastiki njalo njalo kwinkqubo yokuvelisa iphepha. Isetyenziswa ngokubanzi xa kusenziwa kwakhona i-pulp kunye ne-egg tray production line. Uhlobo olutsha olusulungekileyo lokucoca ukungcola okunzima kusetyenziswa ikakhulu ekususeni ukungcola okunje ngegrabile, isinyithi esilahliweyo, uthuli ...
Isicelo sokucoceka koxinano
Aba batyaleli bakhetha ukhetho lwekhadibhodi yamaphepha ephepha lekhadibhodi, ikhadibhodi yokucoca umgubo luhlobo lwesixhobo sokutsala esisetyenziselwa ukususa iigreyiti zemizuzu, amagwebu, iplastiki kunye nokunye kwinkqubo yokuvelisa iphepha. Isetyenziswa ngokubanzi xa kusenziwa kwakhona i-pulp kunye ne-egg tray production line.
Uhlobo olutsha olunzima lokucoceka
Isicoci esinzima sisetyenziselwa ukususa ukungcola okunzima njengegrabile, isinyithi esinyibilikisiweyo, uthuli kunye ne-inki enkulu evela kuhlobo oluthile lwe-pulp. Ukuhambelana okungaphezulu kokufikelela kunokufikelela kwi-2%, ukunciphisa ukulahleka kwefayibha, ukuphucula amandla emveliso, ukunciphisa amacandelo afunekayo kunye Ukucoceka okuphezulu, okuthintela ukufumba komxholo womlotha kumacandelo okugqibela. Ukuthembeka okuphezulu kokusebenza, ngekhe kuvinjwe.
Izixhobo zokucoca i-pulp zokucoca ulwelo / ukucoca i-Centri ngephepha kunye ne-pulp mill
Ukucocwa okunzima okusebenzayo okuyi-450 yinkqubo yokususa ubumdaka kumgaqo ococekileyo we-centrifugal ococekileyo. Ukususwa okungafunekiyo kobumdaka obunzima kwi-slurry gravel, i-iron, uthuli kunye ne-inki enkulu kunye nezinye iinkqubo zokucoca i-slurry. Isicoci esinzima esingama-400 singadityaniswa ngokokucoca ukukhanya okucoca ukukhanya, ukufezekisa isiphumo sokucoca.
Zibo yunfeng iseramikhi mveliso co., LTD
Ukuhamba kunye: 450-480L / min
Kuxinzelelo lweplasma: 0.6-2.5%
YF500LF-Q ezijongene nemiba ngemiba yezemfundo zeBlass esuswayo luhlobo olutsha lwe-slag ye-slag esebenza kakuhle eveliswa ngesiseko sobuchwephesha obuphambili ekhaya nakwamanye amazwe. Yinto phambili slag osusayo osebenzisa umgaqo we-centrifugal ukususa ubumdaka kwi-slurry.
Ukuxinana slag erhabaxa ezimeleyo neempawu oluludaka ngokusebenzisa ulawulo eyahlukileyo zezahluli zeBlack.
Ubume benkqubo buhambelana, kwaye inani kunye nenombolo yokwahlulahlula kwe-slag kuncitshisiwe.
Ukusebenza ngokuhlukana kuphezulu, uxinzelelo lokusebenza lunokufikelela kwi-3%, umphezulu wangaphakathi ugudile, kwaye akukho mfuneko yokuvelisa amanyathelo oxinzelelo.
Umxholo wokungcola kwi-slag erhabaxa uphezulu kwaye ilahleko yefayibha incinci.
Ngokuhlaziya i-slag erhabaxa kunye nokuqhubeka nokwenza ikhoboka kuwo onke amabakala, akukho kubhloka kwenzeka ngexesha lokusebenza kwaye ukubetha kuncinci.
Isibini, iimpawu zeYF500LF-Q yokususa izinto ezininzi ezisebenzayo
A. Ukwahlula isakhiwo
Isicoci sesakhiwo sokwahlulahlula, isicoci sonke sinokuhlulwa sibe ngamacandelo ama-3-4, kulula ukuqaqa
B. Iindlela ezahlukeneyo zokukhutshwa kwe-slag
Isicoci seYF500LF-Q sinokukhetha iindlela ezahlukeneyo zokukhutshwa kwe-slag ngokweemfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi: ukungcola okunzima okusemazantsi, ukungcola komqolo ophezulu, ukuziqhelanisa nokusebenza komsebenzisi.
C, ceramic banxibe enganyangekiyo ukususwa umlomo
Indawo yentamo kunye nomlomo wazo zonke i-slag centrifugal yindawo apho i-velocity eguqukayo kunye nokunxiba kuyeyona kugxilwe kuyo.
Icandelo elisezantsi lekhowuni yesahluli se-slag sisebenzisa umlomo wombhobho wokunxiba owomileyo, ongaqinisekisi kuphela inqanaba lokukhutshwa kwe-slag kodwa uzolula nobomi benkonzo.
Inkampani ngokweendlela ezahlukeneyo zokuxhelwa kunye neemfuno zomsebenzisi ezahlukeneyo zokubonelela ngeefom ezahlukeneyo, iinkcukacha ezithile zomlomo we-ceramic slagging.
Iiparamitha eziphambili zobuchwephesha zeYF500LF-Q ekusetyenzisweni kwamatye ahlukeneyo
Ukupasa okungafaniyo: 450-480L / min
Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza: 4kg / cm²
Ubushushu obuphezulu bokusebenza: 70 ° C
Umahluko woxinzelelo phakathi kokungena kunye nokuphuma kwe-slurry: 1.6 ~ 2.0kg / cm²
Ukuhamba kokutya okukodwa: 435 ~ 480L / min
Ubuncinci uxinzelelo olulungileyo olulungileyo: 0.1kg / cm²
Uxinzelelo lwe-Inlet: ngaphantsi kwe-3%
Inqanaba lokususa uthuli lweLime:> 90%
Ukuhamba kwamanzi ahambayo: 20 ~ 60L / min
Isine, ezona zinto zilulutho ekusebenzeni
isebenzisa iteknoloji yokuhlanjululwa kwe-centrifugal
ukusebenza eliphezulu, ukuqinisekisa oluludaka amanzi ucoceko
ukuhla koxinzelelo oluphantsi, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwenkqubo
Ulungelelwaniso luhambelana, ukunciphisa ukogquma indawo yommandla
isahluli ngasinye se-slag ngaphakathi nangaphandle kwetyhubhu yeplasma ixhotywe ngevalve ngokulandelanayo, ukunciphisa ixesha lokuphumla kwenkqubo, ukwandisa inkqubo yokuqina kunye nokuthembeka
Ukuqina kwezinto zenylon
Ungakhetha iifom ezahlukeneyo ngokweemfuno ezahlukeneyo, iinkcukacha ezahlukeneyo yodongwe banxibe-ukuxhathisa umlomo zeBlack
khetha iindlela ezahlukeneyo zokukhupha
Isisihlanu, owona mhlaba uphambili wesicelo
I-YF500LF-Q yemisebenzi emininzi yokususa i-slag kwindawo efanelekileyo yofakelo
A. Emva kokusefa okuxineneyo okuphantsi naphambi kokujiya kwiinkqubo ezahlukeneyo zokutsala
B, ngaphambi kokucoca ukukhanya kwe-slag
C. inkqubo oluludaka phambi komatshini iphepha
2, zeBlack enokusetyenziselwa ezi ntlobo zilandelayo kwenkqubo yokulungiselela oluludaka
Inkqubo ehlaziyiweyo yefayibha
Inkqubo yokutsalwa kwemichiza
Egqithileyo Ukuguqula izinto zokucoca zahlulahlula ukukhanya (i-wax, iplastiki, kunye nezinye izinto ezinamathelayo.) Ezingcolisayo ezivela kwimicu
Okulandelayo: Iphepha leNkunkuma lePulpu licoca ukucoceka okuxineneyo
Isicoci sePhepha lePulp Ukwenza
Ulungileyo ukucoceka indawo
Iphepha Pulp Ukwenza Izixhobo
Iphepha lePulp Ukwenza oomatshini
Intlama Ukucoca Iphepha Ukwenza Umatshini
Umahluli Slag Kwiphepha Mill
Isicoci sentsimbi engenasici esicocekileyo sokwenza iphepha